အလှကုန်အရောင်းဆိုင်တွေကို ရောက်ဖူးသူတိုင်း "Paul Mitchell" ဆိုတဲ့အမှတ်တံဆိပ်ကို တွေ့ဖူးကြပါလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒီလုပ်ငန်းရဲ့တည်ထောင်သူတစ်ဦးဖြစ်ရုံသာမက၊ ငယ်စဉ်က အလွန်ဆင်းရဲပြီး အိမ်ခြေမဲ့ဘဝကို နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်ရောက်ရှိခဲ့ပေမယ့် ဘဝကိုအရှုံးမပေးဘဲ ကြိုးစားခဲ့ရာက လုပ်ငန်းပေါင်းများစွာကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့သူ John Paul Dejoria ရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာဇာတ်လမ်းအကြောင်းကို တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
The financial system plays an important role in the economic development ofacountry. In the United States and China, the world's most powerful economies, there is alsoastrong financial system. This lesson aims to understand the position of the financial markets and the fundamentals of an improved financial system.
There isastrong positive relationship between financial market development and economic growth. Financial markets help to efficiently direct the flow of savings and investment in the economy in ways that facilitate the accumulation of capital and the production of goods and services. In this lecture, you can learn about the components of financial system and conditions of financial market.
Airbnb လို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ Hospitality လုပ်ငန်းများစွာထဲကမှ နိုင်ငံတကာမှာ အောင်မြင်မှု များစွာရရှိထားတဲ့ အမေရိကန်အခြေစိုက် အွန်လိုင်းဈေးကွက်တစ်ခု ဖြစ်ပါ တယ်။ အသက် 27 နှစ်အရွယ် ဒီဇိုင်နာလူငယ်နှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Brian Chesky နဲ့ Joe Gebbia တို့ဟာ Airbnb ကိုစတည်ထောင်ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရ အိုင်တီကျွမ်းကျင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Nathan Blecharczyk နဲ့ပေါင်းမိကြပြီးတော့ Nathan ဟာ Airbnb ရဲ့ ပူးတွဲတည်ထောင်သူတစ်ယောက် ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီသင်ခန်း စာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ Airbnb ဖြစ်ပေါ်လာပုံနဲ့ Brian Chesky နဲ့ Joe Gebbia တို့ရဲ့ ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ ဘဝအတွေ့အကြုံများကို မျှဝေလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ယခုသင်ခန်းစာမှာဆိုရင်တော့ ဈေးနှုန်းသက်သာမှုရှိတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေပေးပြီးတော့ ယုံကြည်မှုကို တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ အချက်တွေကိုကိုင်ထားပြီးတော့ အရှိန်အဟုန်နဲ့ ကြီးထွားလာတဲ့ Airbnb လုပ်ငန်းရဲ့ ဈေးကွက်စီးပွားရေးပုံစံကို တွေ့မြင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
The7Habits of Highly Effective People, first published in 1989, isabusiness and self-help book written by Stephen Covey. It isaself-improvement book. It is written on Covey's belief that the way we see the world is entirely based on our own perceptions. In order to changeagiven situation, we must change ourselves, and in order to change ourselves, we must be able to change our perceptions.
This isabook review of “7 habits of highly effective people” written by Stephen Covey. You can learn7habits that is used by successful people in their specific fields.
ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ပူပင်သောကတွေကို ကင်းဝေးနေချင်တာဟာ လူတိုင်းရဲ့ ဆန္ဒပါ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီလိုငွေကြေးလိုအပ်ချက်ကြောင့် မပူမပင်ရ ဘဲကိုယ်စိတ်ဆန္ဒရှိတဲ့အတိုင်း သုံးစွဲနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိဖို့ဆိုတာက ကိုယ့်ရဲ့ငွေအဝင်အထွက်တွကို စနစ်တက်ထိန်းသိမ်းနိုင်မှသာ ဖြစ်လာနိုင်မှာပါ။ ဒါကြောင့် ဒီသင်ခန်းစာမှာ ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ပူပင်သောကတွေ ကင်းဝေးစေဖို့ အကြုံပြုချက်တွေကို သိရှိစေရန် ရည်ရွယ်ပါတယ်။
အနာဂတ်အချိန်မှာ ငွေအကုန်အကျသက်သာဖို့နဲ့ ဥစ္စာတွေတိုးပွားလာစေဖို့ ငွေကြေးသုံးစွဲမှုကို ကောင်းမွန်စွာစီမံခန့်ခွဲတတ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီသင်ခန်း စာမှာဆိုရင်တော့ မိမိရဲ့ ငွေကြေးတွေကို ကောင်းကောင်းစီမံခန့်ခွဲနိုင်ဖို့အတွက် အချက် (၁၀) ချက်ဖြင့် ရှင်းလင်းဖော်ပြထားပါတယ်။
အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကျော် ဟမ်ဘာဂါလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ McDonald ကို လူတိုင်းသိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒီလုပ်ငန်းရဲ့ ပထမဆုံးသော McDonald စားသောက်ဆိုင်ကို ၁၉၄၈ ခုနှစ်မှာ McDonald Brothers လို့လူသိများတဲ့ မောရိ(စ်) နဲ့ ရက်ချက်စ်ဆိုတဲ့ ညီအစ်ကိုနှစ်ယောက်က ကယ်လီဖိုးနီးယား ပြည်နယ်မှာ စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် McDonald ကိုဒီနေ့အချိန် မှာတွေ့မြင်ရတဲ့ ကမ္ဘာကျော်လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်လာအောင် လုပ်ဆောင်ခဲ့သူ ကတော့ Ray Kroc ဆိုသူဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ Ray Kroc ရဲ့ McDonald နဲ့ပတ်သက်တဲ့ လုပ်ဆောင်ပုံတွေ၊ ဒီနေ့အချိန်ထိ အောင်မြင် လာအောင်ကြိုးစားခဲ့ပုံတွေကို သိရှိစေရန် ရည်ရွယ်ပါတယ်။
အခုအခါမှာတော့ McDonald ဟာနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၀ ကျော်မှာ ဆိုင်ခွဲပေါင်း ၃၇၀၀၀ ကျော်ထိဖွင့်လှစ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ Ray Kroc ရဲ့ အဓိကခံယူချက် ကတော့ ဝင်ငွေနည်းတဲ့လူတွေအားလုံး ဈေးသက်သက်သာသာနဲ့ ဝယ်ယူစားသုံးနိုင်မယ့် အစားအသောက်တွေကို ထုတ်လုပ်ရောင်းချဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာတော့ အခက်အခဲ၊ ဝေဖန်မှုတွေကြားထဲမှ McDonald ကိုဒီနေ့ဒီအချိန်ထိ အောင်မြင်အောင်မှုရရှိရန် ဖန်တီးခဲ့တဲ့ Ray Kroc ရဲ့ စွမ်းဆောင်ချက်တွေကို တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Business Ethic Issue
Ethical issue isaproblem or situation that requiresaperson or organization to choose between alternatives that must be evaluated as right (ethical) or wrong (unethical). The purpose of this lecture is that businesses can identify their ethical issues and correct effectively which leads to improve their business reputation.
This lecture explains about ethical issues that are mostly encountered by businesses such as misconducts and environmental issues and how to overcome these problems.
The law of contract is essential to carry on trade or commerce smoothly, because it introduces definiteness in the business transactions. It also defines the conditions under which the remedies are available. The primary purpose of contract law is to enforce the agreement of the parties. The aim of this lecture is that business can perform their contracts correctly and effectively as they outline expectations for both parties, protect both parties if those expectations aren't met.
In this lecture, you can learn about importance of contract law and Myanmar Contract Act (1872).
ကမ္ဘာကျော်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုအဖြစ် ရပ်တည်နေတဲ့ KFC ကြက်ကြော်ဆိုင်ကြီးရဲ့ Logo အမှတ်တံဆိပ်မှာ မြင်တွေ့နိုင်တဲ့ လူကြီးရဲ့ပုံကတော့ ကာနယ်ဆန်းဒါးစ် ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ပုံဟာ KFC ကြက်ကြော်ဆိုင်ကို တည်ထောင်ခဲ့သူ တစ်ဦးအဖြစ် သာမက သူ့ရဲ့ ဇွဲလုံ့လရှိမှု၊ အလျော့မပေးဘဲ ကြိုးစားအားထုတ်မှု၊ အရည်အသွေး ကောင်းမွန်မှု၊ စွန့်ဦးတီထွင်မှုတွေရဲ့ ပြယုဒ်တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသင်ခန်းစာမှာဆိုရင် အသက်ငယ်ရွယ်မှု၊ ကြီးမြင့်မှု တို့က အောင်မြင်တဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် ဖြစ်လိုသူတွေအတွက် အဟန့်အတားမဖြစ်ဘဲ ကိုယ့်လိုရာပန်းတိုင်ကို ကြိုးစားပုံဖော်နိုင်ကြောင်း သိရှိစေရန် ရည်ရွယ်ထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာတော့- ကိုယ်ဆန္ဒရှိတဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခုကို တည်ထောင်နိုင်ဖို့၊ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့ဘဝတစ်ခုကို ရရှိနိုင်ဖို့အတွက် ဘယ်လိုအသက်အရွယ်ပဲ ဖြစ်ပါစေ၊ ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေကိုပဲ ကြုံတွေ့ရပါစေ အလျော့မပေးဘဲ ရုန်းကန်ကြိုးစားပြီး အောင်မြင်မှုရယူနိုင်စေရန် စံနမူနာယူနိုင်မယ့် KFC ကြက်ကြော်ဆိုင် အမှတ်တံဆိပ်ရဲ့ တည်ထောင်သူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ကာနယ်ဆန်းဒါးစ်ရဲ့ ဘဝဇာတ်လမ်းကို တင်ပြပေးထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီသင်ခန်းစာလေးကတော့ စီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ ဟောပြောပွဲတွေ၊ သင်တန်းတွေသွားတက်တဲ့အခါ မကြာခဏကြားရလေ့ရှိတဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှုဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ဝေါဟာရတွေ၊ ဆင်တူရိုးမှား ဖြစ်နိုင်တဲ့ စကားလုံးတွေဖြစ်တဲ့ Effectiveness၊ Efficiency နဲ့ Economy of scale ဆိုတဲ့ E သုံးခု အကြောင်းကို ရှင်းလင်းနားလည်စေဖို့ ရည်ရွယ်ထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ယခုသင်ခန်းစာမှာဆိုရင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့ ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်တွေသတ်မှတ်တဲ့နေရာမှာ၊ လုပ်ဆောင်ချက် တွေကို အကဲဖြတ်သုံးသပ်တဲ့နေရာမှာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်တဲ့ 3E’s – ၁. Effectiveness ၂. Efficiency ၃. Economy of scale အကြောင်းကို တင်ပြပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။